Marketing amin'ny finday vetivety amin'ny Internet, ny fianarana tsara indrindra avy amin'ny mpandraharaha | Martech Zone
Talata, May 2, 2017 Wednesday, May 3, 2017 Herin'ny Cáit
Efa am-polony taona no niditra sy nitazona finday avo lenta ny finday avo lenta. Ny data dia mampiseho fa amin'ny taona 2018, hisy mpampiasa smartphone 2.53 miliara manerantany. Ny mpampiasa antonony manana fampiharana 27 amin'ny fitaovany.
Ahoana no anaovan'ny orinasa ny tabataba rehefa be ny fifaninanana? Ny valiny dia miorina amin'ny fomba fitarihana data momba ny marketing amin'ny fampiharana sy ny fahatakarana ny lesona avy amin'ireo mpivarotra finday izay mamono azy io any an-tsahan'izy ireo.
Ny sehatry ny lalao, tsena finday efa matotra izao dia mirakitra fahombiazana tsy mampino. Misaotra ny fandrosoana amin'ny fandrakofana sy ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny finday, ny fanadihadiana ny angona, ny UX ary ny marketing amin'ny finday, ny vola miditra amin'ny lalao manerantany dia nahatratra 91 miliara dolara tamin'ny faran'ny 2016. Fantatry ny mpandraharaha lalao fa zava-dehibe ny fahazoana vola, fa ny teti-bolan'ny marketing kosa dia laniana amin'ny fampielezan-kevitra hihazonana amin'ny finday. Manome baomba bebe kokoa ho anao izy ireo. Ny tatitra momba ny Mobile iGaming Insights dia mamaritra ny sasany amin'ireo tetika lehibe hanamafisana ny fihazonana amin'ny finday.
Ampidiro eto ny kopiao
Ny orinasam-pilalaovana dia mifantoka amin'ny maodely fividianana finday manokana, dian'ny mpanjifa mahery vaika, manomboka amin'ny asan'ny mpilalao sy mandeha ho azy ny fizotr'izany. Ny mpandraharaha filokana sy filokana dia tsy mahalala afa-tsy ny fampiasana ny fantsona tsara indrindra ho an'ny mpilalao amin'ny fotoana mahaliana azy indrindra. Manomboka amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fampandrenesana fampandrenesana, mitarika amin'ny fananganana tsirairay, mpandresy iGaming no mandresy amin'ny ady amin'ny finday.
Ao amin'ny Element Wave izahay dia miara-miasa amin'ireo mpandraharaha filokana sy filokana lehibe indrindra any Eropa. Nandefa hafatra am-barotra antsasa-tapitrisa miliara izahay ary nanadihady hetsika fisehoan-javatra tsy tambo isaina. Ny torolàlana momba ny iGaming Insights finday dia misy maimaimpoana mba hianarana avy amin'ireo mpivarotra finday.
Torolàlana momba ny Mobile iGaming Insights
Ny mpitari-dalana dia mijery lalina ny amin'ny fotoana tena izy sy ny lalao ataon'ny mpilalao alohan'ny lalao amin'ny fampiharana. Ny fomba iray atosiky ny data amin'ny fizotran-tena miankina amin'ny fitondran-tenan'ny mpilalao dia manome traikefa amin'ny finday mahasarika.
Ny tatitra ataonay dia mifantoka amin'ny valin'ny hafatra an-tserasera an'arivony, fampandrenesana fanosehana ary fitondran-tenan'ny mpilalao manerana ny fampiharana sportsbook sy casino.
Mampiseho fironana mazava sy valiny azo vinavina amin'ny diany fisoratana anarana ny angona. Indraindray dia sarotra na sarotra ny fizotry ny fisoratana anarana amin'ny finday. Mety ho fanamby ho an'ny mpilalao izany. Ny tatitra ataonay dia manoritra ny isan'ny mpilalao mahafeno ny fisoratana anarana ary avy eo miova, miaraka amin'ny torohevitra hisorohana azy.
Ny laharam-pahamehan'ny mpilalao sy ny tahan'ny fitakiana bonus dia manome marika mazava ny amin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny ezaka amin'ny marketing amin'ny finday. Ny fahafantaranao hoe rehefa avy aiza ny mpampiasa anao ary aiza no manampy azy hanitsy ny paikadinao hahomby kokoa.
Amin'ny fotoana katroka dia ny bala volafotsy ho an'ny iGaming ary manolotra izahay fa fotoana kely fotsiny io, alohan'ny hahatongavany ho fenitra ho an'ny zoro rehetra. Ny fakana fotoana tena izy dia mifototra amin'ny zavatra ataon'ny mpampiasa amin'izao fotoana izao, ny fandefasan-kafatra mifototra amin'ny fotoana tena ary ny famakafakana fotoana tena izy dia mitarika fitomboan'ny fifamatorana sy ny fitazonana azy. Toy ny amin'ny fizahana ara-tsosialy sy faharoa, misy fifandraisana misy eo amin'ny filokana sy ny mpandraharaha filokana ary ny fampiharana noho ny tena fotoana ara-panatanjahantena. Toy izany koa no azo lazaina manerana ny zoro rehetra.
Ny fivoaran'ny fakan-tsarimihetsika dia midika fa manana fiovana be dia be ny mpandraharaha iGaming. Izay nalehan'ny mpilalao tany amin'ny bookies taloha, dia afaka miloka amin'ny alàlan'ny seza misy sandry, eo amin'ny bara mijery ny lalao izy ireo, na amin'ny fiara na ao amin'ny trano fidiovana mihitsy aza! Ny sakan'ny angon-drakitra misy ankehitriny dia mampihetsi-po: manomboka amin'ny toerana, ny fiteny ary ny haavon'ny fitaovana, hatramin'ny tantaran'ny filokana, ny fampiasana hetsika amin'ny fampiharana, ary ny filokana. Ity haavon'ny data ity sy ny fampiasana an'ity angon-drakitra ity dia manome ny mpandraharaha iGaming ny lohalaharana amin'ireo orinasa marobe amin'ny sisiny hafa.
Momba ny Element Wave
Element Wave manangana automatique marketing ara-potoana ho an'ny filokana ara-panatanjahantena, hampitombo ny fifanakalozam-bola amin'ny finday hatramin'ny 10X. Miorina ao Galway, Ireland Element Wave dia manome teknolojia sy serivisy fitantanana manam-pahaizana ho an'ny indostrian'ny filokana sy filokana.
Tags: fampiharana casinocommutingonja singaelementwavefilokanalalaompilalaolalaolalaotoeranahafatrafilokana findaylalao findaylalao findayfampiharana lalao findayfahitana ny lalao findaytorolàlana hevi-baovao momba ny finday igamingfandefasan-kafatra findaygambling amin'ny Internetmpilalaoamin'ny fotoana katrokafilokana ara-panatanjahantenafampiharana filokana ara-panatanjahantena
Cáit Power no mitarika Team CRM Mobile ho an'ny Element Wave, izay anaovan'izy ireo teknolojia tsy mampino izay manome hery ny automatisation marketing. Ny fiavian'i Cait dia ny varotra finday, ny asa fanaovan-gazety ary ny dia.
inMotionNow dia mandefa ny fizotran'ny asa an-tserasera amin'ny mailaka marketing